Iingcebiso ngokuthenga iimaski ze-PM2.5
Ungazikhetha njani iimaski ze-PM2.5? Iidolophu zanamhlanje zizele ngumsi, kwaye umgangatho womoya uyaxhalabisa. Sixoxa ngokuba iimaski zibhekisa kwiimaski zokhuselo ezilungiselelwe ngokukodwa i-PM2.5, ngelixa iimaski eziqhelekileyo zisetyenziselwa ikakhulu ukugcina ukubanda. Izinto zabo kunye nokubalulwa akukho mfuneko yokudityaniswa ...
Ngaba imaski yakho yobuso inxitywe ngokuchanekileyo?
Isigqumathelo se-anti haze sisidingo semihla ngemihla kubomi bemihla ngemihla, esinokuthintela uthuli, inkungu, ukungunda komzimba kunye neminye imisebenzi, kunye nokuthintela uthuli ekungeneni kwimiphunga yomzimba ngomngxunya womlomo kunye nomngxunya wempumlo nokonakalisa umzimba. Ngoku masibone ukuba yeyiphi indlela elungileyo yokunxiba imaski yenkungu i ...
Iimaski ze-PM2.5 zabantwana nazo ziya kuba nefuthe elithile. Iimveliso ezilungileyo zinokuthintela uninzi lomoya ongcolileyo. Iziphumo zazo ziya kuchaphazeleka kwezinye izinto ezifanelekileyo, ezinje ngohlobo lokungcoliseka komoya, njengobungakanani beemaski ezifanelekileyo, ezinje ngendlela yokunxiba ...
Ukusebenza kwentengiso ka-2020
I-AH-CENTER CO., LTD 2,000,000,000 iiPC ezilahlwayo zobuso, ii-8,000,000 iiPC FFP2 / FFP3 KN95 Mask, Isikhuselo seGown 5,000,000 iiseti kunye ne-1,000,000 Forehead InfraRed Thermometer. .
I-Ah-Center Co, Ltd ifumene uluhlu olumhlophe lwamashishini okuvelisa amayeza amaTshayina
Iimaski eziveliswe yi-AH-CENTRE CO., LTD zivumile isiqinisekiso se-FDA SAMAZWE NGAMAZWE
Iimaski eziveliswe yi-AH-CENTRE CO., LTD zivume i-CE, nge-5 kaJuni 2020
I-AH-CENTER CO., Umnini mveliso wezonyango ngu-I, II, III imveliso yezixhobo zonyango kunye namashishini athengisa, inkampani ikummandla wophuhliso we-qianshan yuantan.
I-AH-CENTER CO., Umnini mveliso wezonyango ngu-I, II, III imveliso yezixhobo zonyango kunye namashishini athengisa, inkampani ikummandla wophuhliso we-qianshan yuantan. Inkampani ine-100,000-grade yocweyo lokucoca lwe-1600 yeemitha zesikwere, ixhotywe nge-9 imaski yonyango ezilahlayo ...